Myanmar – Page2– Lily Par
May 22, 2019 joseph 0
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကျရာတာဝန်ကို မဆုတ်မနစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် ဂျပန်ခေတ်တွင် စစ်ဝန်ကြီးနှင့် စစ်သေနာပတိအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဖက်ဆစ် တိုက်ဖျက်ရေး၊ ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအဖြစ် လည်းကောင်း ခေါင်းဆောင်ကာ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တို့တွင် ရှိရ မည့်အရည်အချင်းများအကြောင်းနှင့် တာဝန် […]
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန် မြို့တွင် သံဃာတော်တစ်ပါး အပါအဝင် လူ(၄)ဦးသေဆုံး
May 21, 2019 joseph 0
တီးတိန်မြို့အနီး ချောက်ထဲကားထိုးကျ သံဃာတော်တစ်ပါးအပါအဝင် လူ(၄)ဦးသေဆုံး ရန်ကုန်မြို့ကနေ တီးတိန်မြို့သို့ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့တက်လာတဲ့မော်တော်ယာဉ်ဟာ တီးတိန်မြို့မရောက်ခင် (၆)မိုင်အလိုမှာ လမ်းဘေးချောက်ထဲထိုးကျလို့ သံဃာတော်တစ်ပါးပျံလွန်တော်မူပြိး လူ(၃)ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ ယင်းကားဟာ မံဆွောင်းတံတားအကျာ် လမ်ဇန်ရွာအနီး လမ်းကွေ့တစ်နေရာမှာ အခုလို ပေ (၆၀၀)ခန့်အနက်ချောက်ထဲထိုးကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ တီးတိန်မြို့အခြေစိုက် Shalom လူငယ်လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ ကိုပွီးယာက […]
ရိုးရိုးသားသား အကြော်ရောင်းနေတဲ့ အကြော်သည်ကို မဝယ်ပဲခေါ်ပြီး ရန်စအနိုင်ကျင့်
May 18, 2019 joseph 0
သူ့ကိုယ်​သူ ရိုးရိုးသားသား လုပ်​​ကိုင်​စား​သောက်​​နေတာကို ​၀ယ်​မယ်​ဆိုပြီး ​ခေါ်တယ်​တဲ့. ပြီး​တော့ မ၀ယ်​​တော့ဘူးဆိုပြီး ရန်​ရှာ​တော့ ​ရောင်းတဲ့လူက မ​ပေး​တော့နဲ့​ပြောတာကို ဆဲဆိုပြီး အ​ကြော်​ဗန်းကိုလှန်းကန်​ပြီး လူကိုလဲ ထိုးတယ်​တဲ့ ဆီပူ​တွေလဲ ​ခြေ​ထောက်​မှာ ရွှဲလို့. ကိုယ်​​တွေ ဆိုင်​ကယ်​ ဖြတ်​သွားတုန်း ​​တွေ့တာက . ဟိုလူရန်းကား​တွေက ​ဈေးသည်​ကို […]
ဆေးလိပ် သောက်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများ၏ လိင်အင်္ဂါ သေးငယ်ကျုံ့လှီ သွားစေနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်များ အတည်ပြု
May 16, 2019 joseph 0
ဘော်ဒါတို့ကို စိတ်မကောင်းတဲ့ကြားကပဲ ပြောရတော့မှာပဲ။ စီးကရက်လေး နှုတ်ခမ်းတေ့ရင်း သောက်ရှုလိုက်ရတဲ့ ခဏဟာ စတိုင်လည်း ကျသလို ခါးတွင်းချဉ် ပြေပြီး အရသာလည်း တစ်ရှိုက်မတ်မတ် ရှိလှတယ်ဆိုတာ ဆေးလိပ်သမားတိုင်း အသိပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဆေးလိပ်ငွေ့တွေကြားမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ စတိုင်မကျတော့မယ့် ယောက်ကျားတန်ဖိုးက အန္တရာယ်တစ်ရပ်အဖြစ် ရှိနေပါတယ်။ […]